Caleema saarka Madaxweynaha Hirshabeelle oo Jowhar ka socota - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Caleema saarka Madaxweynaha Hirshabeelle oo Jowhar ka socota
Caleema saarka Madaxweynaha Hirshabeelle oo Jowhar ka socota
October 22, 2016 admin2143 Comments on Caleema saarka Madaxweynaha Hirshabeelle oo Jowhar ka socota
Waxaa goor dhow bilaabatay munaasabada caleema saarka Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa maamul goboleedka Hirshabeelle , waxaana madasha caleema saarka ku sugan Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa, Madaxweynaha Galmudug Mudane C/kariin Xuseen Guuleed, Madaxweynaha Koofur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sh. Aadan, Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan,
Sidoo kale waxaa Munaasabada ka qeyb galaya Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Michaeal Keating, Danjiraha Jaamacadda Carabta, Safiirka Shiinaha, Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD, Madaxda gaartay Jowhar ayaa ku tagay Diyaarad Helicopter oo ka degtay garoonka kubadda cagta ee Xaafada Kulmis, oo aan sidaa uga fogeyn hoolka shirarka ay ka dhaceyso Munaasabada.
Isniintii la soo dhaafay ayay aheyd markii magaalada Jowhar lagu doortay Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali C/llaahi Cosoble iyo Cali Guudlaawe Xuseen.
Ammaanka magaalada Jowhar ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaa gebi ahaanba la hakiyay isu socodka labada gedi ee magaalada, iyadoo ciidamo fara badan la dhigay waddooyinka magaalada, kuwa ka baxa iyo kuwa soo galaba.
Daawo: Wasiirkii 2-aad oo maanta iska casilay maamulka Galmudug.
Shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD oo goor dhow furmay (Sawirro)
Dagaal goor dhow ka bilowday duleedka Godinlabe
Sawirro: Saraakiil Shabaab ka tirsanaa oo isku dhiibay KoofurGalbeed
3 thoughts on “Caleema saarka Madaxweynaha Hirshabeelle oo Jowhar ka socota”